Ngokwezibalo, amabili kwabathathu abesifazane ukwenza izinwele igalelo-ezomile kabili ngesonto. Umbuzo uwukuthi, kahle ukuthi bakwenza kanjani lokho. Lokhu kubonakale ndaba elula ngokwanele, kodwa kukhona amatshe amaningi "kwamanzi", kulula kanjalo lokulimaza izinwele nge dryer izinwele futhi ikamu elula.
Yini odinga ukukwazi ngaphambi kokuqhubeka nge ukufakwa?
Okokuqala, ukuze izinwele isitayela, umshini wokomisa izinwele wenza, wabheka ezinesizotha enhle, udinga ukuba izinwele ukubukeka enempilo. Ngakho-ke, ukuqeqeshwa kufanele kuqale lapho ziwashwa efanele.
Lapho ekhetha imoto, hhayi lazy khulu ukufika kuye, futhi namafutha, futhi ngisho kangcono nutritive izinwele buso.
Manje, njengoba i-ikamu: kubalulekile ukukhetha ibhulashi nge bristles esingokwemvelo, Electrify izinwele futhi ephephile kakhulu ekhanda.
Izinwele isitayela umshini wokomisa izinwele akwenziwa ngokushesha ngemuva kokuba ngigezise ikhanda lakho. Kuyadingeka ukumanzisa izinwele ngethawula futhi uzivumele zome kancane. Ungase ukwazi ukudonsa izinwele, wasinikeza umphumela wamaphaphu disorder kuphela lapho izinwele nje manzi, nabo ngeke sokukhipha amanzi, ungakha alungise izinwele.
Okokuqala sisebenzise imikhiqizo izinwele isitayela. Lokhu kungenziwa nge ikamu noma iminwe.
Ungabese uqhubekele omiswe. Khumbula umthetho cardinal: uma ufuna izinwele zakho isitayela, umshini wokomisa izinwele kwakungabantu aluhlaza futhi kwekhanda - ivolumu, baqale ome imicu kusukela ezimpandeni kuya amathiphu. Uma umgomo wakho - ukuqondisa izinwele noma ukudala nokupakisha ngaphandle umthamo okweqile, ubambe hairdryer ngaphezu kwekhanda lakho, iphele izinwele kusukela emikhawulweni ukuze izimpande.
Lapho ekhetha dryer izinwele, hhayi ekulondolozeni kuwufanele, kungcono uhlale ku kudivayisi, iziphi kunezinqubo eziningana ukushisa nokubanda okukhulu emoyeni umsebenzi. Ngaphezu kwalokho, kungcono ukuze ome izinwele zakho, hhayi umoya oshisayo efudumele, futhi ekubekeni igcinwe eside ngangokunokwenzeka, emva izinwele esomile, kufanele kube selehlile ngendiza.
Kunezinhlobo eziningana omiswe encane izinwele izimfihlo esebenzisa abalungisa izinwele ukudala zezinwele stylish ngempela futhi ubeke izinto ngononina ngoba isikhathi esifushane.
Kungenzeka uye waqaphela ukuthi amakhosi ngokuvamile upakishe kusukela Strand phansi, kancane kancane akha isamba esiphezulu umbala. Kini nonke abanye curls ungagxambukeli lapho omisiwe imicu phansi, usebenzisa pin kwawo isiqeshana Ukugunda. Ekhaya, ungasebenzisa noma yikuphi izikhonkwane ezingaba ngokuphelele ubambe izinwele zakho ngenkathi sula Strand phansi.
"Bombazh" indlela isetshenziswa ukudala zezinwele aluhlaza usebenzisa izinwele impande akunika emkhakheni ivolumu. Ukuze le ndlela isetshenziswa laying ikamu flat.
"Ukuxubha" indlela. Ngokuvamile, ezifana igalelo-sula izinwele ivumela ukunikeza izinwele ivolumu, ngokudonsa imicu izinwele usebenzisa ikamu isiyingi. Le ndlela kufanelekile ngokuphelele iyiphi ubude izinwele, into esemqoka - ngakwesokudla ukukhetha ubukhulu ezifanele ibhulashi round.
izinwele igalelo-eyomile umlomo wombhobho, "diffuser" kuyadingeka ukudala zezinwele nge amaza okukhanya futhi curls yemvelo. Izinwele, omisiwe esebenzisa umlomo wombhobho, ubukeka nenhle futhi umbukwane, ngaphandle-ke kuvumela ukwenza ukupakisha ngokushesha kakhulu futhi nje.
Phakathi ukudalwa yimuphi kwekhanda kumele iqondiswe komoya ukuba lock ekhethiwe futhi uqinisekise ukuthi izinwele akusho ahlakaze bacondze etindzaweni letehlukene. Uma uza ekubekeni umthwalo futhi ungazami ukukwenza ngokushesha, ungathola yi omkhulu - akukho okubi kakhulu ukwedlula salon professional. Ukunaka umucu ngamunye, ungakwazi step by step ukwakha kwekhanda, okuyinto wakhulelwa.
abesifazane abaningi abakuqondi isitayela kanjani izinwele zakho dryer futhi isetshenziselwa ukunikeza izinwele ivolumu ngefaskamu ezahlukene kanye curling izinyawo ngeketanga. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngokusebenzisa hot curling ngamaketanga futhi izinwele bafa, omile futhi ephukile, futhi akuyona indlela engcono kuthinta kakhulu ngokubukeka kwabo.
Manje kufanele ukwazi ukudala kwekhanda ngokwabo hhayi ziqala ukubuza umbuzo: indlela yokwenza isitayela izinwele?
Dream Ukuhunyushwa: yini uyaphupha mushroom
Kavdzharadze Maksim Gennadevich: Biography, izinto zasemsebenzini, oxhumana nabo